आइतबार एकैदिन थपिए ४६३ संक्रमित, कुन जिल्लामा कति ? (विवरणसहित) – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/आइतबार एकैदिन थपिए ४६३ संक्रमित, कुन जिल्लामा कति ? (विवरणसहित)
काठमाडौं- नेपालमा आइतबार थप ४६३ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ । यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या १२ हजार ७७२ पुगेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नियमित लाइभ अपडेटमा नेपालमा हालसम्म १२ हजार ७७२ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिएको हो ।
डा गौतमका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा १७९ जना कोरोना संक्रमणमुक्त भइ अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन् ।